एसएलसी-२०७२ | Hamro Patro
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी, भक्तपुरले वर्ष २०७२ को प्रवेशिका अर्थात एसएलसी (SLC) परीक्षा चैत्र १८ गते बिहिबारदेखि संचालन गर्दैछ । परीक्षा तालिका अनुसार १८ गते अनिवार्य अंग्रेजी र १९ गते अनिवार्य नेपालीको परीक्षा हुँदैछ । त्यसैगरी २१ गते अनिवार्य गणित, २२ गते विज्ञान, २३ गते सामाजिक र २४ गते स्वास्थ्य जनसंख्या तथा वातावरण विषयको परीक्षा हुँदैछ । ऐच्छिक तर्फ चैत २५ गते ऐच्छिक प्रथम र २६ गते द्धितिय विषयको परीक्षा हुनेछ । यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा कुल ६ लाख १५ हजार ५ सय ५३ जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । यो संख्या गत वर्षको भन्दा ४० हजार बढि हो । नियमित तर्फ ४ लाख ५२ हजार ८ सय ८१ जना र १ लाख ५९ हजार ४ सय १७ जनाएक्जाम्टेड तर्फका विद्यार्थी छन् । नियमित तर्फ भने २ लाख २५ हजार ३ सय ४६ जनाछात्र र २ लाख २६ हजार ५ सय ३५ छात्रा रहेकाछन् । त्यसैगरी प्राविधिक एसएलसी तर्फकुल ३ हजार २ सय ५५ जनाले परीक्षा दिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । योवर्ष पनि मनाङमा एउटा मात्रै परीक्षाकेन्द्र छ र त्यहाँ ६९ जना परीक्षार्थीले परीक्षा दिंदैछन् । सवैभन्दा बढि काठमाडौं जिल्लामा ९५ परीक्षाकेन्द्र छन् । त्यहाँ ३६ हजार ८ सय ८६ जना परीक्षार्थी छन् । परिक्षाका लागि १ हजर ९ सय ४३ वटापरीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ८१ वटाले बढी हो । परीक्षासम्पन्न गर्न प्रत्येक केन्द्रमा १५ जनाका दरले सुरक्षाकर्मी सहित कुल ७२ हजार ८ सय ९६ जना कर्मचारी परिचालन हुँदैछन् ।
२०७१ मा सम्पन्न भएको एसएलसी परीक्षामा भने ५ लाख ७२ हजार २ सय ७ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।उक्त परिक्षा चैत्र ५ गतेदेखि भएको थियो । यस वर्षको परीक्षा सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्व प्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा रहेको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको बैठक बसी सवै तयारी पुरा भईसकेको जनाएको छ ।
﻿﻿एसएलसी- एक झलक﻿﻿
प्रवेशिका परीक्षाअर्थात अंग्रेजीमा यसलाई School Leaving Certificate Examination (SLC) भनिन्छ । यो परीक्षा नेपालको विद्यालय स्तरमा संचालन हुने अर्थात दश कक्षा उतीर्ण हुने अन्तिम परीक्षा हो । तत्कालिन अवस्थामा नेपालको शैक्षिक मोडका रुपमा वि.सं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षाको शुरुवात भएको थियो । वि.सं. १९९० को कार्तिक १६ गते नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको हो । पहिलो पटक सोहि वर्ष पौष अन्तिम सातादेखि एसएलसी परीक्षा संचालन भएकोथियो तर माघ २ गतेका दिन भूकम्प गयो । परीक्षा केही दिन रोकियो । त्यतिबेला ३४ जनाले एसएलसी परीक्षामा सहभागीता जनाएका थिए । उक्त परीक्षामा कोही पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएनन् । ३४ मध्ये १० जना द्वितीय श्रेणी र ९ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । द्वितीय श्रेणी ल्याउने मध्ये सवैभन्दा धेरै अंक पुष्पभक्त मल्लले प्राप्त गरेका थिए । बाँकी १४ जना असफल भए भने एकजना परीक्षामै अनुपस्थित थिए । आठ सयपूर्णाङ्कको उक्त परीक्षामा प्रत्येक विषयमा ३६ नम्बर ल्याउँदा उतीर्ण भएको मानिन्थ्यो । त्यतिबेलाको परीक्षा भारतको पटना विश्वविद्यालयसंगको सम्बन्धनमा त्यहिंबाट खटिएका सुपरिटेण्डेण्टले संचालन गर्दथे । यो क्रम वि.सं. २००२ सालसम्म चलिरह्यो । पछि वि.सं. २००३ सालमा आएरमात्रै नेपालमै आफ्नै परीक्षा प्रकृया अनुसार एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । एसएलसी परीक्षामा सवैभन्दा धेरै अंक ल्याउनेको नाम "बोर्ड फस्ट" का रुपमा वि.सं. १९९० सालदेखि नै राख्नथालिएको हो । नेपालको पहिलो महिला बोर्ड फस्ट लुना भट्ट हुन् । उनी २०३९ सालको एसएलसीमा बोर्ड फस्ट भएकी थिइन् ।
﻿ग्रेडिङ प्रणाली- सवै पास﻿
विद्यार्थीहरुको फलामे ढोका भनेर एसएलसी परीक्षालाई चिनिन्थ्यो । यस परीक्षालाई भाग्य कोर्ने परीक्षा पनि भनिन्थ्यो । सवैभन्दा धेरै आफ्नै मेहनत र बाँकी भाग्य प्रतिको विश्वास लिएर एसएलसी परीक्षामा विद्यार्थीहरु सामेल हुँदैआएका थिए । तर अव यस वर्षदेखि एसएलसी परीक्षा पश्चात यस्तो नतिजा प्रणाली लागू भयो कि अव कुनै विद्यार्थी फेल हुँदैनन् । यो नतिजा प्रणालीलाई ग्रेडिङ भनिएको छ । यसलाई वैज्ञानिक प्रणाली पनि भनिएको छ । यस प्रणाली अनुसार विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डि र ई ग्रेड प्राप्त गर्दछ। जस अनुसार कुल पुर्णाङ्कको ९० देखि १०० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई आउटस्ट्यान्डिङ्ग अर्थात ए प्लस (A+) ग्रेड र ८० देखि ९० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई एक्सिलेन्ट भनेर ए(A) ग्रेड दिइन्छ । त्यसैगरी ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई लाई बी प्लस(B+) अर्थात भेरी गुड, ६० देखि ७० भन्दा कम प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई गुड अर्थात बी (B) ग्रेड, ५० देखि ६० भन्दा कमप्रतिशत अंक ल्याउनेलाई सी प्लस (C+) अर्थात अवभ एभरेज, ४० देखि ५० प्रतिशत कमलाई सी(C) अर्थात एभरेज ग्रेड दिइन्छ । बाँकी २० देखि ४० प्रतिशतभन्दा कमलाई डि(D) अर्थात विलो एभरेज र अन्तिम १ देखि २० प्रतिशतभन्दा पनि कम अंक ल्याउनेलाई ई(E) अर्थात इनसफिसियन्ट ग्रेड दिइन्छ । यसका आधारमा पहिले जस्तोपास र फेल नभनि विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरको मापन ग्रेडको आधारमा हुनेछ । परीक्षामा सी, डि र ई ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले भने ग्रेड सुधार्न चाहेको खण्डमा मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य विकसित देशमा जस्तै नेपालमा पनि परीक्षाको नतीजामा पास वा फेल उल्लेख नभई परिक्षार्थीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा ग्रेड दिने प्रणाली लागु गरिएको हो । ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार अव एसएलसी- फलामे ढोका रहेन ।
यस प्रकारको नतिजा प्रणालीलाई नाफा मूलक उदेश्य राखेर खोलिएका निजी विद्यालयहरुले असहमति जनाए पनि समग्रतामा शिक्षा विद्हरुले सकारात्मक कदम भनेकाछन् । पुरानो नतिजा प्रणाली अनुसार विगतमा आधाभन्दा बढि विद्यार्थीहरु एसएलसी परीक्षामा फेल हुने गर्दथे । फेल हुँदा विद्यार्थीको बाँकी सवै शैक्षिक यात्रामा ब्रेक लाग्ने गर्दथ्यो । यसै कारण नेपालको शिक्षा पद्धतिको आलोचना हुँदै आएको थियो । पास वा फेलको साटो विद्यार्थीको विषयगत ज्ञानकोमापन ग्रेडका आधारमा गर्नु नै ग्रेडिङ हो । त्यहि भएर पनि हाम्रो जस्तो देशमा 'फलामे ढोका' भनेर कठिन परिक्षाका रुपमा चिनिएको एसएलसी लाई आमूल परिवर्तन गरिएको हो ।
﻿भुँइचालो र तराईआन्दोलन: मुख्य चुनौति
यस वर्ष एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि निकै कठिन बनेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएलगत्तै विनासकारी महाभूकम्प गयो । यसबाट काठमाडौं उपत्यका सहित मध्य नेपालको पहाडी क्षेत्रको जनजीवन नै तहसनहस बन्यो । भुकम्पका कारण करिब डेढ महिनासम्म विद्यालय तहको सवै क्षैक्षिक गतिविधी ठप्प भयो । ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भुइँचालोका कारण करीव ९ लाख ९९ हजार बालबालिकाको विद्यालय तहको पढाई प्रभावित बन्यो । ८ हजार ३ सय ८ वटा विद्यालयका ३२ हजार कक्षा कोठामा क्षति पुग्यो । यसबाट विशेषगरी एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थीहरु नराम्ररी प्रभावित बने ।
यो वर्ष तराईका जिल्लाबाट एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने विद्यार्थीहरुले भने निकै ठुलो चुनौतिको सामना गर्दैछन् । ६ महिना लामोतराई बन्दका कारण विद्यार्थीहरुको पठनपाठन प्रभावित भयो । बन्दका कारण एसएलसी परीक्षाको तयारी राम्ररी हुन सकेन । विद्यार्थीहरुले कोर्स पूरा नभई एसएलसीपरीक्षामा सहभागी हुनुपर्दा निकै असजिलो मानेकाछन् । पश्चिम तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषादेखि पुर्वी तराईको सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र मोरङ जिल्लाबाटपरीक्षा दिने करीव ६५ हजार विद्यार्थीले चर्को मुल्य चुकाउदैछन् । विद्यार्थीहरुले विद्यालय संचालन नभएपछि निजी स्तरमै भए पनिपैसा तिरेर कोचिङ कक्षा र निजी ट्युसन कक्षामा सहभागी भए । तर त्यो पनि पर्याप्त हुनै सकेन । नेपाल सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र मोबाइल एप्स मार्फत तयारी कक्षा चलाएको भने पनि त्यो सवैका लागि पहुँचमारहेन । नियमिततर्फ परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको हाजिरी न्यूनतम ७० प्रतिशतअर्थात् १ सय ५४ दिन हुनु पर्दछ । तर विद्यालयमा विद्यार्थीको यस्तो हाजिरी २० प्रतिशत भन्दा कम पाइएको छ । अर्कोतिर यस वर्ष पनि चर्को लोडसेडिङ कायमै रह्यो । एक दिनमा १२ घण्टा बढि लोडसेडिङ हुँदा विद्यार्थीहरुले परीक्षाको तयारी गर्न सकेनन् । चौतर्फी समस्याले गर्दा विद्यार्थीहरुमा एसएलसी बिग्रने हो कि भन्ने कुराले मानसिक तनाव उत्पन्न गराएको पाइन्छ ।
मानिसहरुले यस वर्षको एसएलसी परीक्षासंग भुँईचालोको प्रसंग पनि जोडेका छन् । मानसपटलमा अविस्मरणीय बनेको वि.स. १९९० सालको भुँईचालो र त्यहि वर्षदेखि एसएलसी परीक्षा सुरु हुनुलाई रोचक प्रसंगका रुपमा चर्चा गरिन्छ । यो एउटा संयोगमात्रै भएपनि वर्ष २०७२ को ग्रेडिङ प्रणाली सहितको एसएलसी र भुँईचालो चिया चौताराको बिषय बनेको छ ।